Wiil Dhalinyaro Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho -
[ November 27, 2021 ] Madaxweyne Ku-Xigeenka Jubbaland Oo Gaaray Magaalada Garoowe	Wararka
[ November 27, 2021 ] Maamulka Koonfur Galbeed “Guddiga FEIT Xaq Uma Laheyn Inuu Joojiyo Doorashada Kursiga HOP103”	Wararka
[ November 27, 2021 ] Guddiga Doorashooyinka Koofurgalbeed Oo Ka Hor Yimid In La Hakiyo Kursiga HOP103	Wararka
[ November 27, 2021 ] Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo oo ka socda Boosaaso.	Wararka
HomeWararkaWiil Dhalinyaro Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho
Wiil Dhalinyaro Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho
November 22, 2021 F.G Wararka 0
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, ayadoo ay kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aaddan dilkaan oo loo gaystay wiil dhalinyaro ah.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xalay degmada Karaan ee Gobolka Banaadir dil loogu gaystay Wiil Dhalinyaro ah oo ka mid aha dadka degaanka.
Dilka ayaa waxaa fuliyay dabley hubeysan oo sida la sheegay gudaha u galay Guriga uu ku sugnaa Wiilka la dilay, waxaana dilku uu sigaar ah uga dhacay xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ee Gobolkani Banaadir.
Marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Mukhtaar Yalaxow, waxaana uu ka mid ahaa dadka degaankaasi, sida ay sheegeen dadka degaanku.
Dableydii dilka fulisay ayaaa goobta isaga baxsaday sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah, waxaana halka falku ka dhacay gaaray Ciidanka Dowladda, kuwaasi oo sameeyay howgallo ballaaran oo ay ku baadi goobayaan dableydii dilka gaysatay.
Maalmihii ugu dambeeyay Magaalada Muqdisho waxaa ka dahcayay dilala qorsheysan oo loogaystay Oday dhaqameedyo iyo nabaddoonoo, kuwaasi oo siyaabo kala dwuan loogu dilay Magaalada muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.